It is me. Ko Niknayman.: January 2008
Posted by Ko Niknayman at 9:29 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 3:43 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 9:23 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:03 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 9:20 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 2:55 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 5:40 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 2:46 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 8:38 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:35 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 5:34 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 2:03 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 1:29 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 10:02 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 8:31 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:14 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 9:00 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:12 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 5:58 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 3:33 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 5:57 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 4:51 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:59 PM Links to this post
ဇန်န၀ါရီ ၁၆ ရက်က မောင်စည်သူမောင် ( ၂၁ နစ်)၊ မောင်ရဲ့ မြတ် ဟိန်း ( ၁၇ နစ် )၊ မောင်ရဲ မင်းဦး ( ၂၂ နစ် )၊ ကိုကြည် ဖြူနှင့် ဦးသိန်းဆွေ တို့ ကို ၅၀၅ (ခ) နဲ့ဗဟန်းမှာ ရုံးထုတ်မည်ဟု သိရှိရပါတယ်။ ပုဒ်မ - ၅၀၅ ၊ ၅၀၅ ( ခ ) ဆိုသည်မှာ ဆူပူလှုံဆော်မှု နှင့်စပ်လျဉ်းပါသည်။ ထောင်ပြောင်းရွှေ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့်ပြောင်းရွှေ့တယ်ဆိုတာကို မသိရသေးပါ။
Posted by Ko Niknayman at 4:11 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:27 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 5:56 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:13 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 10:58 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:42 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:32 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 9:49 AM Links to this post
၂၀၀ရခုနှစ် စက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းကစပြီး နအဖခေါင်းဆောင်သန်းရွှေရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြအနေဟာ တရှိန်ထိုး ကျဆင်းသွားခဲ့တာ အများအမြင်ပါဘဲ။ အခုဆိုရင် သိသိသာသာကြီး နောက်ကလူတစ်ယောက်ကနေ လိုက်တွဲပေးနေရတဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီ။
မသေခင်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့သမျှအမှားတွေ သံဃာနဲ့ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်စော်ကားခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် အမြင်မှန်ရပြီး သူရဲ့ နောက်လိုက်ငယ်သားတွေနဲ့တစ်ကွ တိုင်းပြည်ကို ၀န်ချတောင်းပန်ပြီး မတရားယူထားတဲ့အာဏာကို ပြည်သူထံအမြန်ပြန်အပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အသေဖြောင့်ပြီး မိုက်ကြွေးမိုက်ပြစ်တွေအတွက် အ၀ီစိငရဲမှာ သက်သာကောင်းပါရဲ့ ။
ကျန်ရစ်သူများလည်း အာဏာပါဝါကို လက်နက်အားကိုးနဲ့ဘယ်လိုအုပ်ချုပ် ဘယ်လောက်အုပ်ချုပ်ချုပ် တစ်နေ့ ကြရင် သေလမ်းသွားကြရမှာမို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအစစ်အမှန်ကိုရစေတဲ့ သန့် ရှင်းမွန်မြတ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုလုပ်ပြီး၊ လူသားအချင်းချင်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်းမျိုး မလုပ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဘ၀နိဂုံးမကောင်းခဲ့ကြတဲ့ နေ၀င်းတို့ ၊ မသေခင် ဘ၀ကံကြမ္မာတပတ်လည်ခံနေရတဲ့ ခင်ညွန့် နဲ့အချို့ သောဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့နေ့ မြင်ညပျောက် အာဏာပြုတ်ခဲ့ရတဲ့ သာဓကတွေကို မြင်သင့်နေကြပါပြီ။
Posted by Ko Niknayman at 8:27 AM Links to this post
ဒီနေရာမှနေ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ အတွက် အသက်စွန့် လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့ကြသော သက်ပိုင်စိုးနှင့် ကိုကိုဝင်းတို့ ကို ဂုဏ်ပြုရင်း ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ အာဏာရှင်အုပ်စုကို ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်။
Posted by Ko Niknayman at 9:24 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 9:52 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 9:32 AM Links to this post